Crohn Disease Surgery (ခရုန်းရောဂါအား ခွဲစိတ်ခြင်း) : ခွဲစိတ်မှုက ဘာလဲ။ ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘာတွေဆိုးကျိုးရှိနိုင်မလဲဆိုတာတွေအတွက် | Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ခွဲစိတ်ကုသမှုများ » Crohn Disease Surgery (ခရုန်းရောဂါအား ခွဲစိတ်ခြင်း)
Crohn’s disease ခွဲစိတ်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ။
Crohn’s disease ခွဲစိတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ Crohn’s disease အား ကုသခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းရောဂါသည် အူများရောင်ရမ်းသည့် ရောဂါတစ်မျိုးပင်။ ရောဂါသည် များသောအားဖြင့် အူသိမ်အစွန်ပိုင်းများတွင် အဖြစ်များ၏။ သို့သော်လည်း အူ၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Crohn’s disease ကြောင့် သင့်အူနံရံများ ထူလာနိုင်သည်။ ထိုကြောင့် အစာများကို ပိတ်သွားစေနိုင်၏။ ဖြစ်နေသောအူနေရာတွင် အစာတွင်ပါသည့် အာဟာရများကိုပါ မစုပ်နိုင်တော့ပါ။ မကုသပဲထားပါက ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ အူပေါက်ခြင်း၊ အစာသွားရာလမ်းကြောင်းပြဿနာနှင့် ပေါက်ထွက်ပြီး ဝမ်းခေါင်းအတွင်စီးခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ဤကုသမှုတွင် ဆရာဝန်မှ ဖြစ်နေသည့်အူအပိုင်းကို ဖယ်ရှားပေးမည်ဖြစ်သည်။
Crohn’s disease ခွဲစိတ်ခြင်းကို ဘာကြောင့်လုပ်ရသလဲ။
အစားအသောက်နှင့် လူနေမှုပုံစံပြောင်းခြင်း၊ ဆေးဖြင့်ကုသခြင်း သို့မဟုတ် တခြားကုသမှုများ လုပ်နေသော်လည်း လက္ခဏာများ သက်သာမလာပါက Crohn’s disease ခွဲစိတ်ခြင်းကို ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ညွှန်ထားပါသည်။
Crohn’s disease ရောဂါရှိသူ တစ်ဝက်လောက်အထိ အနည်းဆုံးတော့ တစ်ခါခွဲစိတ်ရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ခွဲစိတ်မှုသည် Crohn’s disease ကို အမြစ်ဖြတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
Crohn’s disease ကို ခွဲစိတ်ခြင်းက များသောအားဖြင့် ခဏတာသာ သက်သာစေခြင်းဖြစ်သည်။ ရောဂါသဘောက ပြန်ပြန်ဖြစ်တတ်ခြင်းပင်။ များသောအားဖြင့် ဖြတ်စပ်ထားသည့် အူနေရာမှတစ်ရှူးများတွင် ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးမှာ ခွဲစိတ်ခြင်းရော ဆေးဝါးပါ အတူတွဲပြီး အန္တရာယ်ရှိသည်များကို လျော့ချခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
Crohn’s disease ခွဲစိတ်ခြင်းရဲ့ အန္တရာယ်တွေက ဘာတွေလဲ။
Crohn’s disease ၏ နောက်ဆွဲတွဲများဖြစ်သော ဖစ်စတူလာပြွန်များ (အစာခြေစနစ်ရှိ အပိုင်းနှစ်ခုကြား ပြွန်ပေါ်လာခြင်း) သို့မဟုတ် အူကျဉ်းခြင်းတို့ ဖြစ်လာပါက ဒါတွေကိုပါ ကုသရပါမည်။ ဖြစ်ရပ်အများစုတွင် ကုသမှုက လိုကိုလိုအပ်ပါသည်။
ဘယ်ခွဲစိတ်မှုမျိုးမဆို ဖြစ်တတ်သည့် ယေဘုယျ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများမှာ-
Crohn’s disease ခွဲစိတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သည်များမှာ –
တစ်ရှူးများ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ တစ်ခုနှင့် တစ်ခုကပ်ခြင်း
ခွဲစိတ်မှုကိုမလုပ်ခင် အန္တရာယ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများကို သိထားရန် အရေးကြီး၏။ မေးချင်သည်များရှိပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
Crohn’s disease ခွဲစိတ်ခြင်းအတွက် ဘာတွေပြင်ထားရမလဲ။
ခွဲစိတ်မှုကို မေ့ဆေးသုံးပြီး ပြုလုပ်ပါမည်။ သင်လက်ရှိသုံးနေသည့်ဆေး၊ ဓါတ်မတည့်သည်များ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကို ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပါ။ ခွဲစိတ်မှုမလုပ်ခင် မေ့ဆေးဆရာဝန်နှင့် မေ့ဆေးအတွက် အတူပြင်ဆင်ရပါမည်။ မခွဲစိတ်ခင် အစားအသောက်ရပ်ရန် ညွှန်းကြားသည့်အချိန်ကို အတိအကျလိုက်နာရန် အရေးကြီးပါသည်။
Crohn’s disease ခွဲစိနေစဉ် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။
ခွဲစိတ်မှုသည် များသေားအားဖြင့် မိနစ် ၉၀ ခန့် ကြာတတ်ပါသည်။
ဆရာဝန်မှ ဗိုက်ကိုခွဲကာ ရောဂါဖြစ်နေသည့် အူအစိတ်အပိုင်းကို ဖယ်ထုတ်ပါမည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အူမကြီးအစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ကိုပါ ဖယ်ရတတ်၏။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်မှ ဖြတ်ထားသော အစွန်နှစ်ဖက်ကို ပြန်ဆက်ပေးပါလိမ့်မည်။ ဆက်၍မဖြစ်နိုင်ပါက ကိုလိုစတိုမီ သို့ မီလီရိုစတိုမီအဖြစ် ဗိုက်မှအပြင်သို့ ထုတ်ထားပါလိမ့်မည်။
စိတ်ပူသည်များ မေးချင်သည်များရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
Crohn’s disease ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။
၅-၁၀ ရက်အတွင်း အိမ်ပြန်နိုင်ပါသည်။
အပြည့်အဝပြန်ကောင်းလာရန်အတွက်မူ ၃ လလောက်ထိ ကြာတတ်ပါသည်။ လူအများစုသည် အူတစ်ချို့ဖယ်ပြီးပါက ပိုနေလို့ထိုင်လို့ ကောင်းသွားကြပါသည်။
ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက သင့်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကို မြန်မြန်လုပ်လာနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ဆေးခန်းများတွင် မေးမြန်းပါ။
Crohn’s disease သည် မကြာခဏပြန်ဖြစ်တတ်ပြီး နောက်ထပ်အူတစ်နေရာတွင် ပေါ်လာတတ်သည်မျိုးပင်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဒီဇင်ဘာ 2, 2019
Surgery for Crohn's Disease & Ulcerative Colitis. http://www.ccfa.org/resources/surgery-for-crohns-uc.html. Accessed July 16, 2016.
Crohn's disease – Treatment. http://www.nhs.uk/Conditions/Crohns-disease/Pages/Treatment.aspx. Accessed July 16, 2016.